Otu UI 3.1 malitere ibata Samsung Galaxy Note 10 | Gam akporosis
Naanị otu izu gara aga anyị mụtara na Samsung ga-ebupụta One UI 3.1 ruo n'isi dị elu, taa ọ malitere site na ntinye na Galaxy Cheta, ma ọ bụrụ na ị na-eje ije otu n'ime nnukwu igwe ndị a, ị nwere ike ịga na ntọala iji lelee ma ọ bụrụ na ị nwere mmelite dị.
N'oge gara aga ugbu a 3.1 amalitela iru na njedebe ọzọ dị ka Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip, Z Flip 5G, Galaxy Z Fold 2 na Galaxy Tab S7, ọ bụ ezie na n'oge a site na forums dị ka htcmania enweghị ihe akaebe na e tinyela ya.
A okwu nke awa maka ka anyị bido ibudata Otu UI 3.1,, ebe ọ bụ na Germany ọ na-amalite ịbịaru ozi ọma ndị ahụ nke Galaxy S21 ọhụrụ ahụ nke amalitela ihe karịrị otu ọnwa gara aga.
Mmelite ọhụrụ a na-eburu nsụgharị ahụ na ngwa ngwa N97xFXXU6FUBD and it even comes with the March nche patch; na n'agbanyeghị, na Samsung mobiles ka agbatịwo ruo afọ 4 ogologo oge ha ga-enweta nkwado maka ụdị nchekwa nchekwa ndị a.
Mmelite dị ka anyị si mara, mejupụtara 1GB nke nwụnye, wee payaa ntị na ịnọ n'okpuru WiFi iji nwee ike ibudata ya n'emeghị ka ị dataụbiga data ókè na atụmatụ ọnwa gị.
Ihe dị ọhụrụ na One UI 3.1 bụ Ekekọrịta Onwe, Ọta Nkasi Obi Visual, ikike ihichapụ data geolocation nke ihe oyiyi ahụ mgbe anyị na-ekerịta ha, ngbanwe akpaka nke Galaxy Buds n'etiti ngwaọrụ Samsung dị iche iche, na obere mgbanwe dị na njirimara onye ọrụ.
Ihe ọzọ ị kwesịrị iburu n'uche bụ na arụmọrụ nke igwefoto ka mma, yabụ biko nabata ma chere Anyị na-achọ ịnata One UI 3.1 na ekwentị Galaxy Note 10 anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung malitere site na nkenye nke otu UI 3.1 na Galaxy Note10
Etu esi hazie ihe nbudata Netflix ọhụrụ: ihe ohuru nke na-ebudata usoro nke usoro ị na-ekiri